3.29.20 COVID-19 Fanavaozana – Mason City sekoly COVID-19 foibe
3.29.20 COVID-19 Fanavaozana
Manantena izahay fa afaka nahita fisaka volafotsy ny fianakaviananao mandritra ity Break Break COVID-19 ity. Mba omeo fahasoavana ny tenanao, ary fantaro fa eto aminao ny sekoly misy anao ary ho azontsika amin'izany – miaraka.
Jereo ity hafatra amin'ny sary avy amin'ny Superintendent Jonathan Cooper raha nizara ny fandehan'ny distrika misy antsika, ho toy ny amin'ity herinandro ity ny traikefa lavitra lavitra.
Hatramin'ny omaly amin'ny 2 ora tolakandro, tsy misy tranga voamarina momba ny COVID-19 ao amin'ny Sekolin'ny tanànan'i Mason, ary 1,406 raharaha voamarina tany Ohio. Ity ambany ity ny valin'ny fanontaniana iraisan'ny fianakaviantsika sy ny vahoaka.
Fa maninona no tany amin'ny distrika no nifantohan'ireo voalohany ny filàn'ny tena ilaina sy ny fianarana fanampiny??
Ny laharam-pahamehanay voalohany dia ny hananana drafitra hamelomana ny ankizy any an-tsekoly miatrika tsy fahatokisan-tsakafo. Misaotra an'ireo mpiasan'ny sakafon-janaka sy mpiasan'ny fitaterana izahay izay niara-niasa tamin'ny mpiara-miombon'antoka fiaraha-monina toa an'i Joshua's Place sy ny Kaomina Comet mba hamorona toeram-pisakafoanana ho an'ny mpianatra fito, ao anatin'izany ny fanampiana sakafo mandritra ny Spring Break. Kitiho eto raha hahitanao ny fomba ahazoana sakafo misakafo ho an'ny fianakavianao raha miady amin'ny tsy fandriampahalemana ara-tsakafo ianao.
Zava-dehibe ihany koa ny hanomezana fotoana ho an'ny mpampianatra anay hananganana zava-niainana momba ny fianarana zava-tsoa ary hianatra ny fampiasana fitaovana vaovao hanohanana ny fianarana lavitra.. Mpampianatra maro no niaina traikefa tamin'ny fitaovana hianatra lavitra ary ny mpampianatra sasany dia manandrana teknika vaovao sy vahaolana amin'ny teknolojia. Hisy tohotra am-boalohany, fa ny fampianarana sy fanohanana lavitra dia hihatsara rehefa mandeha ny fotoana. Miareta azafady ary tadidio fa ray aman-dreny maro koa ny ray aman-dreny ka azon'izy ireo ny lalanao!
Inona no azoko atao sy ny zanako atao mba hiomanana amin'ny fianarana lavitra?
Fotoana izao ahafahana miantoka ny fidiran'ny zanakao amin'ny fitaovana toy ny Chromebook na solosaina ary manana fahazoan-dàlana amin'ny Internet ny fianakavianao. Raha mila fanampiana ianao mifandray amin'ny iray amin'ireo loharanon-karena ireo, azafady mailaka mailaka [email protected].
Ankoatry ny, ny fanaovana ireto dingana manaraka ireto dia hanampy amin'ny fiantohana ny zanakao miditra amin'ny loharano rehefa zarainy:
Raha zanaka ao amin'ny naoty PK-4 ny zanakao, hahazo mailaka isan'andro amin'ny mpampianatra ny zanakao ianao(S) tamin'ny adiresy tonga tamin'ity mailaka ity. Azafady manatona ny mpampianatra ny zanakao raha te tianao halefa ny adiresy mailaka hafa.
Raha zanaka ao amin'ny naoty ny zanakao 5-12, avereno azafady fa afaka miditra ao amin'ny Sekoly fianarana izy.
Rahoviana ary amin'ny fomba ahoana no hanombohan'ny zanako handray an-tsekoly fianarana lavitra?
Ity herinandro ity, Ireo mpianatra ao amin'ny MCS dia handray anjara amin'ny asa fanabeazana traikefa momba ny fanabeazana lavitra amin'ny alakamisy sy zoma. Hasaina handefasana mailaka na halefa any amin'ny Sekoly sekoly ny takariva alohan'ny fotoana (Alarobia) mba hamela fotoana hanomanana ny fotoana (ohatra, raha maka ankizy amina mpikarakara kely izy ireo).
Vokatr'izany, Tokony ho afaka miditra amin'ny andraikiny voalohany amin'ity alarobia ity ny mpianatra mpianatra, Aprily 1 amin'ny 8 ora alina. Ho an'ny mpianatra PK-4, io andraikitra io dia alefa mailaka any amin'ny ray aman-dreniny / mpiambina. Ho an'ireo mpianatra amin'ny naoty 5-12, havoaka ao amin'ny Sekoly fianarana ny asa.
Fanamarihana: Raha mahazo torolalana akademika fototra amin'ny kilasy manam-pahaizana manokana avy amin'ny mpanelanelana manokana ny zanakao, hifanerasera aminao mivantana ny mpanelanelana mba hamolavola drafitra manokana amin'ny fampitana lesona. Fanampin'izany, Ny mpanelanelana manokana dia efa ary hanohy hifandray amin'ny fianakaviana hiresaka momba ny drafi-panohanana ny torolàlana momba ny votoaty.
Inona no andraikitry ny fandaharana fanandramana lavitra?
Ny andraikitry ny Orient de RLE dia hamporisika ireo mpianatra amin'ny atiny mifandraika amin'ny fiarovana digital sy ny etikety ary eo am-pandinihana koa ny votoatiny ary manome fotoana hanaovana teknolojia vaovao.. Natao hizaha toetra ny rafitra ataonay izy ireo ary manome fotoana hanakorontana raha sahirana ny fidirana an-tsehatra azy ireo ny mpianatra.
Inona no tokony ataon ny zanako eo anelanelan'ny anio sy alakamisy?
The Tranokala Momentum MCS dia manome loharanom-panabeazana maro kalitao nofidin'ny mpanabe Mason. Amporisihinay ny mpianatra hitrandraka ireo loharanom-pitaovana ireo mba hitazonana ny fotoana ianarany rehefa mifindra amin'ny fanandramana lavitra lavitra. Ahitana ny tranokala ihany koa kalandrie ho an'ireo hetsika virtoaly marobe mba maniry ny hizaha ny fianakavianao! ary, mazava ho azy, mandany fotoana hamakiana, ny fanoratana sy ny fahavitrihana dia tsara hatrany!
Mandraisa anjara ao amin'ny Chamber's MADE mba hihinana Takeout Blitz ary jereo ny fisakafoanana any an-toerana izay azonao tohanana. Ankoatry ny, manomeza fanampiana eo amin'ny Toeran'i Joshua ary mifidiana ny "Comet Carryout" ary afaka mitahy fianakaviana sahirana amin'ny sakafo avy amin'ny iray amin'ny orinasanay eto an-toerana.
Manaova trano fambolena homemade: Warren County dia mangataka ny olom-pirenena fetsy hieritreretana fanaovana saron-tarehy vita amin'ny lamba vita amin'ny homemade ezaka atao amin'ny asa aman-tsakaiza amin'ny tahirim-bokatra amin'ny hopitaly, trano fikarakarana maharitra sy ireo mpamaly voalohany amin'ity fiarovana ity. Efa nahita ireo Kometa maromaro niditra tamin'ny hetsika # CraftersAgainstCOVID19 izahay, ary te-hahita ny sarinao!
Maniry anao ho salama mbola ho avy.